MBT-2000 ($5.8 mil) | Myanmar Military
»Army (ကြည်းတပ်)»MBT-2000 ($5.8 mil)
MBT-2000 ($5.8 mil)
Posted by Mr Citadel on August 18, 2013 in Army (ကြည်းတပ်), Main Battle Tanks (ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကားများ)
MBT-2000 ကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ ပါကစ္စတန်နဲ့ တရုတ်တို့ ပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်က Al-Khalid လို့နံမည်ပေးပြီး၊ တရုတ်ပြည်တွင်းမှာ သုံးဖို့အတွက်က Type-90IIM ဖြစ်ပြီး၊ MBT-2000 ဆိုတာကတော့ Export version ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မီ ပစ်ခတ်မှုထိန်းချုပ် စနစ်တွေ၊ ညတိုက်ပွဲဝင်ကိရိယာတွေ၊ အပူလှိုင်းရှာ ကိရိယာတွေ၊ လေဆာအကွာအဝေး တိုင်းစနစ်တွေ၊ လက်နက်တည်ငြိမ်မှုထိန်း စနစ်တွေ အပါအဝင် M1A2, Leopard2A6 တို့မှာတောင်မပါဝင်တဲ့ အလိုအလျောက် ကျည်ဖြည့်စနစ်တွေ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တင့်အဖွဲ့သား (၃)ဦးသာလိုပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ ၁၂၅မမ ပြောင်းချောအမြှောက်ဟာ တင့်ဖျက်ကျည်အမျိုးမျိုးကို ပစ်ခတ်နိုင်သည့်အပြင် တင့်ဖျက်ပဲ့ထိန်းဒုံး (ATGM) တွေကိုလည်း ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ အနောက်အုပ်စုရဲ့ ပင်မတိုက်ပွဲဝင် တင့်ကားတွေထက် ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး၊ ပိုသေးပါတယ်။ ဆိုဗီယက်နဲ့ တရုတ်တင့်တွေရဲ့နည်းပညာတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ၏ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကား Type-90-II ပေါ်တွင် အခြေခံကာ တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် များရဲ့ အင်ဂျင်နဲ့ ဂီယာတွေပါတပ်ဆင်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
MBT-2000 ဟာ Hunter-Killer Capablity ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက် မှတ်ပုံတင်ပြီးပစ်မှတ်ကို အမြှောက်တပ်သားမှ ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်နေစဉ်မှာပင် တင့်အဖွဲ့မှူးမှ နောက်ထပ်ပစ်မှတ်တစ်ခုကို သီးခြားရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်ရော မိမိပါ နှစ်ဦးစလုံး လှုပ်ရှားနေချိန် မှာပင် ပစ်မှတ်ကို ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ပစ်ခတ်မှုထိန်းချုပ်ရေး ကွန်ပြူတာစနစ်မှ ပစ်မှတ်၏ လားရာ၊ ရွေ့လျားနှုန်း၊ ချိန်ရွယ်ရမည့်နေရာ၊ ပစ်ခတ်ရမည့်အချိန် အစရှိသည်တို့ကို တစ်စက္ကန့်အောက်နည်းသည့် အချိန်အတွင်းမှာ အလွန်လျှင်မြန်စွာ တွက်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုများအရ ပထမပစ်ခတ်သည့်အချက်မှာပင်လျှင် မီတာ ၂၀၀၀ အကွာအဝေးမှာရှိသည့် (၈)ပေအကျယ်ရှိပစ်မှတ်ကို တိကျစွာထိမှန်အောင် ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် IBMS (Integrated Battlefield Management System) ‘Rehbar’ လို့ခေါ်တဲ့ကိရိယာများကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့် MBT-2000 ဟာ ၎င်းနှင့်အမျိုးအစားတူ Tank များနှင့်လည်းကောင်း၊ ပင်မဌာနချုပ်နှင့် လည်းကောင်း၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များဖြင့်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်၍ စစ်မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်များကို ဝေငှရုံသာမက၊ ၎င်းစနစ်ပါ Flat Screen တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အတွက် စစ်မြေပြင် အခြေအနေကို ဂိမ်းဆော့နေသလို Overview သိရှိနိုင်ပြီး ပူးတွဲစစ်ဆင်စေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နာရီ (၇၂)ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ မောင်းနှင်နိုင်ပြီး၊ တစ်နာရီ (၃၂)ကီလိုမီတာ အမြန်နှုန်းကို ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ရေအနက် (၅)မီတာရှိရေပြင်ကို ဖြတ်သန်း မောင်းနှင်နိုင်ပြီး၊ ဂြိုလ်တုလမ်းညွှန်စနစ်များလည်း တပ်ဆင် ထားပါတယ်။
တင့်အကာအကွယ်များအနေဖြင့် Leopard2 များကဲ့သို့ Modular Composite Armour, ERA (Explosive Reactive Armour)၊ နျူ နဲ့ ဓာတု၊ ဇီဝလက်နက်အကာအကွယ်များ၊ အပူလှိုင်းရှာဒုံးများရန်မှ ကာကွယ်ရန်မီးခိုးပူထုတ်လုပ်ကိရိယာများ အပြင်အခြား ပေါက်ကွဲမှုထိန်းချုပ်ရေး၊ မီးငြိမ်းသတ်ရေးကိရိယာများလည်း တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
LTS-1 Laser Threat Warning System ကိုတပ်ဆင်ထားသဖြင့် မိမိတင့်ကားပတ်လည် ၃၆၀ ဒီဂရီမှ အန္တရာယ်ကို ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းစနစ်ဟာ အဝေးဆုံး (၁၀)ကီလိုမီတာအကွာက အခြားတင့်ကားများ၊ လေဆာပဲ့ထိန်း ဒုံးစနစ်များမှ လေဆာအကွာအဝေးတိုင်းစနစ်၊ လေဆာပစ်မှတ်မှတ်ပုံတင်စနစ်တို့ကို ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်ပြီး၊ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပင် Alarm များမြည်စေ၍သတိပေးခြင်း၊ မီးခိုးမှိုင်းကာချစနစ်ကိုပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အခြားတန်ပြန် ကာကွယ်ရေး ကိရိယာများကိုပါ အလိုအလျောက်ဖွင့်လှစ်လုပ်ဆောင် ပေးပါတယ်။ မိမိကို ချိန်ရွယ်ထားသည့် ရန်သူ့တင့်ကား၊ ဒုံးပစ်လောင်ချာ တို့၏တည်နေရာကို တိကျစွာ ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ အဓိကလိုနေတာကတော့ ECM မပါတာပါပဲ။
လက်ရှိ MBT-2000 ကို မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ အဓိကတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကား အဖြစ်အသုံးချနေပါပြီ။ ခန့်မှန်း အစီးရေ (၂၀၀)ခန့် ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ မဟာရန်သူတော် ဘ လည်း အစီး (၄၀) မှာထားတယ် လက်ရှိ(၈)စီးရှိပါတယ်။ သီရိလင်္ကာက (၂၂)စီး ဝယ်ပါတယ်။ မလေးရှားက ဝယ်ဖို့လုပ်ပြီး နောက်မှမဝယ်တော့ပါဘူး။ ဆော်ဒီကလည်း ဝယ်ဖို့အတွက် သူ့နိုင်ငံမှာ သဲကန္တာရအတွင်း စွမ်းရည်တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း မဝယ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့် တစ်ကယ့်အမှန်အကန် သုံးစွဲသူတွေ လက်ရှောင်သွားလဲဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာကောင်းနေပါတယ်။ ပီရူးက တစ်ကယ့်တရုတ်ရဲ့ဖောက်သည်ပါ၊ သူလည်း (၅)စီးယူပြီး သူ့နိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ကြည့်တယ်၊ ဒါပေမယ့် သူ့နိုင်ငံရဲ့ရေမြေအနေအထားအရကြောင့်ရော၊ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု တွေကြောင့်ပါ MBT-2000 အစား T-90S တွေကိုသာ ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
Tags: Army_Tanks_MBT-2000 Permalink
← Sukhoi SU-25 TM (SU-39) ($ 11 mil)
AK-630 Series →
5 comments on “MBT-2000 ($5.8 mil)”
aungthuhein September 15, 2013 at 12:11 PM	Reply
Which one is bettter for myanmar army (mbt 2000 or T-90s)?
Mr Citadel September 15, 2013 at 5:08 PM	Reply
T-90A with Shtora-1 is better, then T-90MS is most Advanced Tank in the World.
Zmnaing May 6, 2014 at 7:18 PM	Reply
why Myanmar Procured expensive MBTS-2000 than T-90A?
Zmnaing May 6, 2014 at 7:25 PM	Reply
USA changes their policy or proactive plan for future that USA don,t export their weapons to former buyers ,just JSDF,ROK only….they are transferring weapons market to PRC,ROK £ Ukaraine…
Nay Zar Htat Naing December 14, 2014 at 10:26 AM	Reply
ဈေးနှုန်းက တီ ၉၀ထက်များနေတယ်။တီ ၉၀လောက်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိမလား။ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ တီ၉၀ကိုပဲရွေးမယ်။